Nkwuputa | Zụta Blue, Red, violet, Green Laser Pointer - Lasers-Pointers.com
Ọnọdụ izugbe ndị a (nke dị n'okpuru Ọnọdụ a) na-achịkwa usoro ịzụrụ na ire ngwaahịa ndị Lasers-Pointers.com (nke dị n'okpuru Lasers-Pointers.com) na katalọgụ dị na weebụsaịtị ya bụ www.Lasers-Pointers.com.
Ọnọdụ niile jikọtara Lasers-Pointers.com na onye zụrụ ahịa (Ahịa), na-enye ha usoro nke ikike na ọrụ, site na mgbe nke ikpeazụ a na-anabata ma na-anabata iwu site na peeji ahụ ekwuru. Ndi otu abuo choro ma mara ha, ya mere nnabata ha mgbe ha na-edebanye aha ha dika onye ahia di nkpa ka ha nwee ike ichota iwu. Ya mere, Onye Ahịa ga-eji nlezianya gụọ ọnọdụ ndị a.
Ebube nke okwu dị iche iche bụ naanị ihe ọmụma, ọ gaghị emetụta, iru eru ma ọ bụ gbasaa nkọwa nke General Conditions.
A ga-achịkwa ọnọdụ ndị a niile na usoro iwu dị ugbu a.
1. Akụkụ ndị metụtara
Onye nwe ụlọ ọrụ:
Aha: Luis Corraliza Sanchez
Reglọ ọrụ edebanye aha: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
A ga-ewere onye ahịa na onye ọrụ ọ bụla nke Weebụ www.Lasers-Pointers.com ị na-etinye iwu na nnabata ya n'otu oge mgbe emechara ya.
Onye ahịa ahụ ga-edebanye aha dị ka nke a ma nye data ndị a iji nwee ike itinye iwu: aha na aha nna ma ọ bụ aha ụlọ ọrụ, CIF / NIF, adreesị akwụkwọ ọnụahịa, adreesị nke nnyefe, nọmba ekwentị ịkpọtụrụ na email ịkpọtụrụ. N'oge a, ị ga-anabatarịrị Ọnọdụ ndị a.
Ndị ahịa a nyere ndị ahịa ka a ga-emeso dị ka Usoro ojiji nke weebụsaịtị (ngalaba "Oge Iwu")
2. Nzube nke nkwekọrịta ahụ
Ọrịre nke ngwa ahịa nke Lasers-Pointers.com nyere na Weebụ gị nke Onye Ahịa ahụ na-ere. Ndị a bụ ngwaahịa nke akara laser maka ezubere maka oriri nkeonwe.
3. Onyinye Okike
Ihe enyere onyinye a bu naanị ngwaahịa na egosiputa na websaịtị www.Lasers-Pointers.com, ọ dịkwa ire maka ịzụrụ ụwa niile.
Ngwaahịa ọ bụla nwere mpempe data nke gosipụtara njirimara ọrụ nke ngwaahịa ahụ, akara ahụ, ihe nlereanya, eserese, ọnụahịa ahịa ya na VAT gụnyere na Peninsula na Balearic Islands, yana oge nnweta ahụ dị mkpa maka nnabata na nnyefe ya. n’aka Onye Ahịa.
Mkpokọta ọnụ ahịa ego ahụ ka a ga-agwa onye ahịa ya n'oge ịme iwu gị yana tupu nnabata otu ahụ.
Ọnụ ego nke ngwaahịa bụ nke na-egosi na Weebụ oge itinye ịtụ ego.
4. Nabatara onyinye ahụ
Na-eme n'oge Onye Ahịa na-enye nkwenye ekwuputara nye iwu. Na mbụ, n'otu ịdenye aha dị ka onye ahịa, onye ahịa ga-anabata Ọnọdụ General.
5. Iwu ịkwụ ụgwọ
Enwere ụzọ atọ iji kwụọ ụgwọ setịpụrụ maka usoro ọ bụla, site na nke ị nwere ike ịhọrọ Onye Ahịa:
A) Paymentkwụ ụgwọ n'ihu site na mbufe akụ:
Onye Ahịa ahụ ga-emefe ụlọ akụ na akaụntụ nke Lasers-Pointers.com maka ọnụahịa nke ngwaahịa nke usoro ahụ. Na nnyefe ahụ ga-egosi nọmba ọnụọgụgụ (ọnụọgụ ahụ na-arụ ọrụ nke usoro ahụ na-akpaghị aka mgbe usoro ahụ mechara); Na mgbakwunye na-egosi dị ka-erite uru nke otu ihe ahụ Lasers-Pointers.com.
Nyefe ga-mere n'ime a kacha oge nke ụbọchị iri site na ẹkụre nke iji akụ ụlọ akụ ga-egosi mgbe zuo. Ọ bụrụ na enweghị ihe akaebe nke ịkwụ ụgwọ n'ime oge ahụ, a ga-akagbu iwu ahụ na akpaghị aka.
B) ugwo site na kaadi:
Onye ahịa ahụ nwere ike ịhọrọ ịkwụ ụgwọ site na kaadị ya, na-achọpụta ọrụ ahụ n'oge mmezu nke usoro ahụ. Paymentkwụ ụgwọ site na kaadị bụ 100% n'aka.
6. Nweta nke Iwu
Oge nnyefe nke iwu ahụ dabere na ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ndị mejupụtara ha, nnweta nke egosiri na taabụ nke ngwaahịa ọ bụla na katalọgụ nke Weebụ www.Lasers-Pointers.com. Usoro nke nnweta, maka ebumnuche nke ịgbakọ oge maka nnyefe nke iwu, ga-abụ ndị na-egosi mgbasa ozi na ibe ahụ n'oge onye zụrụ ahịa nyere iwu ahụ.
N'ime usoro iwu dị na usoro ịkwụ ụgwọ tupu oge eruo, a ga-eleba anya maka ngụkọta nke nnyefe na-ekwupụta ihe akaebe nke mmezu nke onye ahịa site na mbufe akụ ma ọ bụ ego ego na nọmba akaụntụ akụ gosipụtara na Lasers- Nkpirisi.
Agbanyeghị, enwere ike gbanwee oge a n'ihe gbasara iwu maka otu ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ndị na-eduga na njedebe ngwaahịa ngwaahịa. Oge ọhụụ ọhụrụ a ga-egosi onye ahịa ya na obere oge enwere ike. Ọ bụrụ na njedebe nke ngwaahịa bụ ihe doro anya, a ga-adụ onye ahịa ahụ ka ịhọrọ n'etiti ịhọrọ ngwaahịa na-abụghị ụdị ndị yiri ya na ọnụahịa yiri ngwaahịa a rere, ma ọ bụ kagbuo iwu gị, weghachite ego akwụpụtara tupu oge nke iwu na usoro Mentkwụ ụgwọ n'ọdịnihu.
Oge na-ebuga na nnyefe ihe karịrị ụbọchị iri dị ka oge ọnụọgụ dị, oge ngbanwe nke enwere na Lasers-Pointers.com, ga-enye Onye ahịa aka ịkagbu iwu ya ma ọ bụrụ na o gosipụta site na ederede site na email na adreesị adreesị @ lasers-pointers. com Na, ebe okwesiri, ego akwụgoro tupu oge eruo, na enweghị ego ọ bụla maka mmebi, ugbu a ma ọ bụ ọdịnihu, nke aka ma ọ bụ na-enweghị isi.
Oge nnyefe ga-adabere n'ụdị mbupu nke ndị ahịa họọrọ, ga-egosi n'oge usoro ịzụta. Usoro ndị a na-adịkarị mma, ọ nweghịkwa mkpuchi ọ bụla, yabụ na ha agaghị abụ ezigbo ihe kpatara ịjụ ngwugwu ma ọ bụ kagbuo nzụta, onye ahịa ahụ ghọtara ma were nnabata ya yana nkwupụta nke mmefu m mepụtara ma ọ bụrụ na ọ bụghị mezue zụọ maka nke a.
Iwu a na-enyefeghị ndị ahịa n’ime ụbọchị asaa e zigara ya maka ebughi ihe kpatara na Lasers-Pointers.com ga-enyeghachi onye na-ere ya, a na-akagbu iwu ahụ maka ebumnuche ya niile, na-eweghachiri onye ahịa ya, ọ bụrụ na enwere, ego a kwụrụ n’iru, na n’enweghi nkwuputa ọ bụla maka mmebi, nke dị ugbu a ma ọ bụ n’ọdịn’anya, na-aga n’ihu ma ọ bụ na-enweghị isi.
A ga-ebuga nnyefe n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ na adresị nnyefe egosiri na data mbufe. Mgbanwe na-esote nke adreesị a nwere ike ịmepụta usoro mmefu nke Onye Ahịa ga-agba.
Ndị ụlọ ọrụ na-ebufe iwu ga-enyefe na adreesị nnyefe nke Onye Ahịa gosipụtara na onye edozila dị ka onye nnata nke otu. A ga-etinye ozi a na akwụkwọ nnyefe nke ụlọ ọrụ na-ebugharị, nke ga-egosikwa ọnụọgụ nchịkọta nke mbupu, ngụkọta ịdị arọ, nọmba iwu na nkwụghachi (naanị na usoro nke iwu emere na usoro ịkwụ ụgwọ maka nkwụghachi) .
A ga-ebubata mbubata nke nnukwu ma ọ bụ ngwaahịa buru ibu, ma ọ bụ nke ngwaahịa na-ewetara ihe isi ike maka nnyefe, na nbudata ozi a akọwapụtara.
Na mgbakwunye na ndetu nnyefe, a ga-ebugara onye ahịa ya akwụkwọ ahịa ọ bụla, site na e-mail.
Ọ bụrụ na akwụkwọ ọnụahịa efu, Onye Ahịa nwere ike ịrịọ ya site na adreesị ozi-e info@lasers-pointers.com, na-egosi aha njide akwụkwọ ọnụahịa na ọnụ ọgụgụ iwu, a ga-ezigakwa gị ozi ọzọ site na ozi-e.
Ọ bụrụ na n’oge nnyefe, a na-ahụ ya nke ọma, na-enweghị mkpa ijikwa nkwakọ ngwaahịa mbupu ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa, na ngwaahịa nwere ntụpọ nke mebiri emebi ma ọ bụ, n’otu aka ahụ, njehie n’ime ngwongwo ndị ahụ enwetara, onye ahịa ahụ ga-edekọrịrị ya na ndenye ozi ma kpọsara ya na Lasers-Pointers.com (site na adreesị ozi-e na adresị info@lasers-pointers.com) n'ime awa 24 ka nnata nke iji wee nwee ike ịrịọ nloghachi nke ngwaahịa emetụtara yana ya ka ọ gbanwee ya site na onye ọhụrụ ma ọ bụ nkwụghachi nke ọnụahịa otu ihe kwụrụ.
A ga-akọrịrị ntụpọ nke ebuputara na ụgbọ njem ahụ nke nwere ike ịja mma mgbe ịmechara ngwa ahịa ahụ n'ime awa iri abụọ na anọ mbụ site na nnata nke iwu ahụ site na akwụkwọ ozi elebara anya na adreesị info@lasers-pointers.com, na-egosi mmebi ndị kpatara ngwaahịa a. yana estchọrọ nloghachi nke ngwaahịa emetụtara yana ya na iji ya dochie anya onye ọhụrụ ma ọ bụ nkwụghachi nke ọnụahịa otu ihe kwụrụ.
7. Ịkagbu iwu
Naanị ịkagbu iwu ka a ga-anabata ma ọ bụrụ na ezitebeghị iwu gị. Ọ bụrụ na a kwadebere ya ma ezigaghị ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkagbu ya, ị nwere ike ime nke a na-eche na ọnụahịa nke 10 € nke a ga-ewepu site na ego a kwụrụlarị dị ka nhazi usoro. Ọ bụrụ na ịkwụbeghị iwu gị maka ịhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ mgbe ị gafere, ị ga-akwụrịrị 10 € site na nkwụnye ego ụlọ akụ na akaụntụ ọ bụla a ga-enye, ma ọ bụrụ na ịnweghị iche ma kweta ụgwọ dị otú ahụ na Lasers-Pointers. com Kedu nke ga-eme usoro iwu ọ were dị mma iji nwetaghachi ego a. Ọ bụrụ na eziterela iwu gị na ị nwere ike izipu ya n'ime oge kachasị elu nke ụbọchị 14, mana ndị ahịa / ndị na-azụ ahịa ga-ebufe ụgwọ mbupu ahụ, gbakwunyere na a ga-ewepụta gị site na ego a ga-eweghachi 15 € maka mbupu ụgwọ na anyị na Nhazi nke iwu.
Ọrụ dịịrị onye zụrụ ahịa / onye ahịa bụ iji hụ na ngwaahịa achọrọ bụ nke ịchọrọ ma nwee obi abụọ banyere ya ọ bụ ọrụ dịịrị onye zụrụ ahịa / ịkpọtụrụ Lasers-Pointers.com iji jụọ maka ngwaahịa ahụ tupu ya amalite ịzụta.
Bụrụ na zụọ ahịa, otu zitere, onye na-anabata ya / onye ahịa jụrụ maka ihe ndị ọzọ karịa Lasers-Pointers.com, ọ nwere ike na-ekwu maka mbupu ụgwọ nke onye nnata otu ihe ahụ, na-amanye nke ikpeazụ ịkwụ ụgwọ ngụkọta mbupu ụgwọ a kpatara nke uche na-eme atụmatụ na 20 €.
8. Akwụkwọ ikike Ahịa
Usoro iwu nke nkwa (Iwu 23/2003, nke July 10, na nkwa na Ahịa Ahịa Ahịa) ebumnuche iji nye ndị ahịa nhọrọ dị iche iche iji chọọ ịdị ọcha mgbe ihe ọma enwetaghị nkwekọrịta ahụ, na-enye ya nhọrọ nke na-achọ ịrụzi ma ọ bụ dochie ihe ọma ahụ, belụsọ na ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụ na-ahaghị nhata. Mgbe mmezi ma ọ bụ nnọchi ahụ agaghị ekwe omume ma ọ bụ enweghị ihe ịga nke ọma, onye na-azụ ahịa nwere ike ịrịọ mbelata ọnụahịa ma ọ bụ nkwụsị nke nkwekọrịta ahụ. Ngwaahịa a nwere ikike nke afọ 2 site na ụbọchị nnata nke mbupu. Ndị na-emepụta ngwaahịa a bụ naanị ọrụ maka nkwa ahụ ma nye nkwado dị mkpa na azụmaahịa na ahịa. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere ụdị nsogbu ọ bụla na ngwaahịa, biko kpọtụrụ Ọrụ Enyemaka Nka (SAT) nke ndị nrụpụta ọ bụla kpebiri.
Site na nke a, Lasers-Pointers.com ga-aza Onye Ahịa ọ bụla enweghị nkwekọrịta ọ bụla dị na oge nnyefe nke ngwaahịa nke usoro a, ghọtara dị ka ngwongwo maka oriri nkeonwe.
Nkwa nke Lasers-Pointers.com bụ ọnwa 6 dị ka onye nkesa, mgbe ọnwa isii bidoro site na ụbọchị iji nye ndị kwere nkwa nkwa ahụ. Lasers-Pointers.com bụrụ na ọdịda nke otu n'ime ngwaahịa ndị a ga-enye onye zụrụ ya adreesị nke onye nrụpụta iji zipu otu maka ịrụzi ma ọ bụ dochie ya. Mmefu nke nloghachi a ga-akwụ onye zụrụ ahịa n'ọnọdụ ọ bụla.
If Ọ bụrụ na ntụpọ ahụ apụta n’otu ọnwa isii izizi site na mbugharị nke ọma, a na-eche na ntụle ahụ adịlarị mgbe ọ zụtara ya na onye na-azụ ya ekwesịghị igosipụta ihe ọ bụla.
· Agbanyeghị, ebe enweghị nkwekọ na-egosipụta onwe ya ka ọnwa isii gachara na ikpe enwere obi abụọ, onye nrụpụta ahụ nwere ike ịchọ mkpesa ọkachamara nwere onwe ya ịhazi nkwa ahụ. N'okwu ndị doro anya nke nrụrụ ọrụ ma ọ bụ ịrụ ọrụ oge ụfọdụ n'okpuru oge ikike enweghị nsogbu.
N'ọnọdụ ọ bụla, n'oge a napụrụ onye na-azụ ngwaahịa ka ọ gbakọọ oge nke nkwa ahụ; Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ nhazigharị ihe dị ụbọchị iri na ise, oge ikike ga-akwụsị ụbọchị iri na ise karịa nke e zubere na mbụ.
Iji nagide nkwa a, Onye Ahịa ga-akpọtụrụ Lasers-Pointers.com site na izipu ozi email na adreesị info@lasers-pointers.com nke ọ ga - egosi: aha akwụkwọ njide akwụkwọ ọnụ ọgụgụ, ọnụ ọgụgụ, ọnụahịa ọnụ ọgụgụ na ihe kpatara enweghi nkwekorita.
Ọ bụrụ na ịchọrọ izigara anyị ngwaahịa gị maka nyocha, a ga-enye adreesị mbupu. Ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ mbupu ahụ. Na-esote ihe mebiri emebi ga-etinyerịrị akwụkwọ ọnụahịa zụrụ yana akwụkwọ ikike nke ejiri teknụzụ Nkwado kwenye. Mgbe ụbọchị 7 sitere na nkwupụta ndị ahịa na Lasers-Pointers.com, ọ bụrụ na anaghị edozi ngwaahịa ahụ ma nyefee ya na ebe Nkwado Nka na ụzụ gosipụtara, ngalaba anyị agaghị anabata nkwupụta ahụ ma kagbuo arịrịọ ahụ site na ịkagbu ụdị akwụkwọ ikike ọ bụla na ngwa oru. Ọ bụrụ na anata ihe mebiri emebi n'ihi nkwakọ ngwaahịa na-adịghị mma, anyị agaghị elekọta mmezi ahụ. Gwa ndị ahịa nsogbu ahụ ma dozie ya site n'aka ndị ahịa na ụlọ ọrụ na-ebugharị. A ga-ezighachiri gị ihe ọ bụla nke anaghị ekwenye na njirimara ndị a, ọbụlagodi na ihe ahụ achọrọ n'akụkụ ndị ọzọ nke akwụkwọ ikike ahụ. Ọ bụrụ na ịhọrọ usoro mbupu na-enweghị nchekwa na ngwugwu mebiri emebi, onye ahịa ga-ahụ maka ọnwụ.
- Usoro nke nkwa.
A) Ọ bụrụ na nnata nke ngwaahịa ahụ gosipụtara na ọnọdụ mkpuchi ahụ kpuchitere mmebi ahụ, ozugbo idozi ma ọ bụ dochie ya ga-alaghachikwuru onye ahịa ahụ na enweghị ego.
· Idozi ma ọ bụ dochie. Ihe mbụ ị ga - eme bụ izipu ngwaahịa iji rụkwaa ma ọ bụ dochie ya na nke ọhụrụ. Nhọrọ ahụ dị n'aka onye na-ere ere, onye ga-ekpebi dabere na mmefu nke nhọrọ ọ bụla na-eme: ọ bụrụ na otu n'ime ha ekwekọghị na nke ọzọ, onye na-ere ahịa nwere ike ịhọrọ nke kachasị adaba maka ọdịmma ha, ọ bụrụhaala na onye na-azụ ahịa echeghị. ọghọm kasịnụ. Ọ bụrụ na otu isiokwu adịghị, a ga-agbanwe nha anya ma ọ bụ karịa uru ga-eme, na-agwa ya mgbe niile yana nnabata ya tupu oge eruo, ma ọ bụrụhaala na arịrịọ nke onye ahịa ahụ ekwesighi, dị ka egosiri na Iwu 23/2003 nke July 10 nke nkwa na ire ahia ahia (BOE no. 165 nke 11-07-2003)
· Mbelata ego ma ọ bụ ịkwụsị nkwekọrịta ahụ. Mgbe ọ gaghị ekwe omume (ma ọ bụ nwee ezi uche) iji dochie ngwaahịa ahụ na nke ọhụrụ, mgbe mmezi ma ọ bụ dochie anya anaghị ahapụ ngwaahịa ahụ n'ọnọdụ kwekọrọ, mgbe oge karịrị akarị ... onye ahịa nwere ike ikpebi n'etiti ịjụ maka mbelata ọnụahịa Ma ọ bụ kwụsị nkwekọrịta ahụ (ọ bụrụhaala na enweghị nkwekọ dị mkpa). Na mgbakwunye, onye na-azụ ahịa nwere ikike ịkwụ ụgwọ maka mmebi ahụ.
Lasers-Pointers.com maka ebumnuche ndị ọzọ karịa ụlọ ọrụ ahụ, anaghị enyefe nnyefe ngwaahịa a kwuru na oge akọwapụtara, na-abụ oge dị ka onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye nrụpụta chọrọ, okwu a ga-agwa ndị ahịa ya ngwa ahịa site na ozi. .
A ga-ebufe mbughachi site na ozi oge niile, na-eme ka onye zụrụ ihe kpatara ọnwụ, mmebi ma ọ bụ ọnwụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ mbupu mkpuchi na ngwa ngwa nwere ike ịhọrọ iweghachi ya site na onye ozi ozigbo, ga-akwụ ụgwọ 3 €. A ga-akwụ ụgwọ a site na nnyefe ego.
B) Ọ bụrụ na nnata nke ngwaahịa ahụ gosipụtara na akụrụngwa na-arụ ọrụ zuru oke, a ga-eweghachite ya na onye ahịa ya ma onye ahịa ahụ ga-akwụ ụgwọ ụgwọ njem nke emepụtara yana ịhazi na ịlele ego, atụmatụ na ngụkọta nke 10 €. A ga-ebufe mbughachi site na ozi oge niile, onye zụrụ ihe na-akpata ọnwụ, mmebi ma ọ bụ ọnwụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ mbupu mkpuchi na ngwa ngwa nwere ike ịhọrọ iweghachi ya site na ozi ebu ozi, na-abawanye ego 3 € gbakwunyere, 13 € ngụkọta. A ga-akwụ ụgwọ a site na nnyefe ego.
C) Ọ bụrụ na, mgbe nnata nke ngwaahịa ahụ, ọdịda nke akụrụngwa achọtara na ọ ga-emebi iwu ikike, a ga-emebi akwụkwọ ikike ahụ. A ghaghachitere ndi ahia ihe a ma gha gha ugwo ugwo ugwo ugwo site na ugwo na nlele mmefu, emeputara na onu ogugu nke 10 €. A ga-ebufe mbughachi site na ozi oge niile, onye zụrụ ihe na-akpata ọnwụ, mmebi ma ọ bụ ọnwụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ mbupu mkpuchi na ngwa ngwa nwere ike ịhọrọ iweghachi ya site na ozi ebu ozi, na-abawanye ego 3 € gbakwunyere, 13 € ngụkọta. A ga-akwụ ụgwọ a site na nnyefe ego.
Ozugbo ịtụle mbubata ngwa ọrụ ahụ, ọnụego atụmatụ nke 5 € kwekọrọ na mgbanwe ọ bụla nke adreesị ma ọ bụ iwe iwe, na arịrịọ nke onye ahịa ma ọ bụ n'ihi na egosiri n'ụzọ ziri ezi n'usoro ahụ, onye ahịa ga-eburu ya.
Ọ bụrụ na eweghachite ngwugwu site na adreesị na-ezighi ezi, anọghị, ịnakọta ma ọ bụ jụ, onye ahịa ahụ ga-amara gị ọkwa mgbe anyị natara ya n'ọfịs anyị ka ọ họrọ ime ya. Ọ bụrụ na ị na-arịọ mbupu ọhụrụ ị ga-akwụrịrị 5 € dị ka ụgwọ mbupu. Ọ ga-ewe otu ọnwa site na ọkwa nke anyị iji kwenye mkpebi, mgbe oge a na-enweghị nzaghachi ga-atụle ịzụrụ ịzụrụ na iwepụ isiokwu gị na ego ha kwụrụ.
- Nkagbu akwụkwọ ikike.
Enweghị nkwenye ọ bụla ga-anakwere mgbe ejiri ngwaahịa ndị ahụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na-abụghị dabere na njirimara ha sitere na ndị ahịa.
Ngwaahịa ahụ na-esi na akwụkwọ ikike maka ihe ndị na-esonụ:
Use Azu ahịa, ịchịkwa ma ọ bụ ndozi ya site na Onye ahịa nke ngwaọrụ ma ọ bụ akụrụngwa.
Ges Ihe ntinye ma obu mmanu ndi mmadu.
Components Ihe mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi mebiri emebi.
Ndozi ezighi ezi, mgbanwe site n'aka ndị otu otu.
· Mwepu, mkpochapu ma obu izobe ya n'aka onye ahia nke Lasers-Pointers.com ma obu onye n’egosiputa ahia gi niile (tinyere akara ndi nwere onu ogugu na akara nke aka).
Nmehie dị n'ihi nsị na-ekwesịghị ma ọ bụ na mpụga ọnọdụ gburugburu ebe obibi akọwapụtara, ntụpọ nke nrụnye, ma ọ bụ iyi na akwa n'ihi ihe akụrụngwa a.
• Mmebi kpatara site na ọdachi dịka ọkụ, idei mmiri, ifufe, ala ọma jijiji ma ọ bụ oké ifufe.
A Mkpuchi ma ọ bụ mebie emebi ihe ndị dị na plastik dịka akwa.
• Mmebi mebiri site na mmetụta na ihe ndị ọzọ, ọdịda, ịṅụ mmiri ma ọ bụ nmikpu n'ime mmiri.
· Mmejọ dị ka nsonazụ nke ndị ọrụ ọkụ na-enyeghị ikike, yana mgbanwe ndị ọzọ ma ọ bụ ndọtị esoghị na nhazi mbụ.
Njehie ndị metụtara mmezi nhazi ma ọ bụ nkwenye dị iche iche.
· Akụkụ ike, dịka batrị. Mbelata ndụ batrị n'ihi usoro nkwụghachi / nhichapụ ugboro ugboro a na-ewere dị ka ihe nkịtị.
• Mmebi site na mberede, mmegbu, iji aka eme ihe ma ọ bụ ngwa na-ekwesịghị ekwesị.
Akwụsị ụgwọ n'ihi na ojiji nkịtị.
Mebila ma ọ bụ mebie ma ọ bụrụ na ọnụọgụ nọmba na akara akara koodu nke ngwaahịa ahụ ma ọ bụ akụkụ ya ọ bụla agbanweela, ehichapụ ma ọ bụ wepụ ya
9. Right nke ịhapụ
Onye ahịa nwere ikike iwepu iwu ahụ n'ime ụbọchị azụmahịa iri na anọ site na nnata nke iwu, dị ka edepụtara na Nkeji edemede 14 nke Iwu 44/7, nke edepụtara na Jenụwarị 1996, na Mkpọpụta.
Onye Ahịa ahụ gharịrị gwa Lasers-Pointers.com site na e-mail (info@lasers-pointers.com) n'ime ụbọchị 14. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịgwa onye ahịa ahụ usoro maka ịlaghachi usoro (nọmba nloghachi, usoro mbupu na adreesị nnyefe).
A ga-eweghari ngwa ahịa niile na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya, n'ọnọdụ zuru oke ma na-ejighị ya. Onye ahia gha agha imeghari ma mee ihe kwesiri ekwesi nke nchedo na nkwakọ ngwaahịa nke ihe a na-eziga na ulo nkwakọba ihe anyi. Ma ọ bụghị Lasers-Pointers.com nwere ikike ịjụ ịlaghachi.
Na mpụga oge a, a gaghị anabata iwepu usoro ọ bụla, a gaghị anabata iwu maka ịnye ngwaahịa emere dị ka nkọwa nke Onye Ahịa ma ọ bụ nke ahaziri nke ọma, ma ọ bụ na, site n'ọdịdị ha, enweghị ike ịlaghachi ma ọ bụ nwee ike imebi ma ọ bụ mebie ngwa ngwa; Na arịrịọ maka nnyefe nke ndekọ ụda ma ọ bụ vidiyo, diski na ngwanrọ nke Onye Ahịa na-emeghe, yana faịlụ kọmputa, na-enye ya na kọmputa, nwere ike ibudata ma ọ bụ mepụtaghachi ya ozugbo maka iji ya na-adịgide adịgide. Ọ bụrụ na eweghachite ngwugwu na ezighi ezi ma ọ bụ ezughi ezu, a ga-amara onye ahịa ahụ mgbe anyị natara ya n'ọfịs anyị ka ọ nwee ike ịhọrọ ihe ọ chọrọ iji ya. Ga-enwe otu ọnwa site na ọkwa site n'aka anyị iji kwenye mkpebi, mgbe oge a na-enweghị nzaghachi ga-atụle na ọ na-eleghara ịzụta anya ma jụ ngwaahịa ya na ego akwụ ụgwọ maka ha.
Onye Ahịa ahụ ga-ebu ọnụ ahịa nke iweghachi ngwaahịa Lasers-Pointers.com. Naanị ma ọ bụrụ na nloghachi ahụ bụ maka njehie mbufe ma ọ bụ ihe ndị ọzọ enweghị ike ịpụta anyị, anyị ga-elekọta ụgwọ mbupu. Anyị anaghị anabata nloghachi ọ bụla maka ibu. Onye ahịa ahụ ga-ahụ maka mmebi ọ bụla kpatara n'oge njem nke nlọghachi na ngwaahịa ahụ. A ghaghachite nloghachi na njedebe n'ime ụbọchị 14 mgbe ụbọchị nnabata nke nloghachi ahụ gasịrị. Ma ọ bụghị ya, a ga-ajụ ma laghachi.
Mgbe Onye Ahịa gosipụtara ikike iwepụ ma ọ bụ ikike iwepụ, ozugbo natara ngwongwo ma kwenye na ọ dị n'ọnọdụ zuru oke Lasers-Pointers.com ga-akwụghachi ụgwọ ego nke Onye Ahịa kwụrụ ụgwọ mmefu nke mbupu, ịkwụ ụgwọ commlọrụ, Weghachi ụgwọ dị ka ụgwọ ụlọ akụ yana nhazi usoro akwụ ụgwọ na 10 €. Nkwụghachi nke ego ndị a ga-eme ozugbo enwere ike na, otu ọ bụla, n'ime oge kachasị elu ụbọchị iri atọ site na ndọrọ ego ma ọ bụ mkpebi.
10. Ọrụ dịịrị onye ahịa
Gụ ọnọdụ Ọnọdụ General dị ugbu a tupu ịdebanye aha gị dị ka onye ahịa.
Na-akwanyere Ọnọdụ niile ùgwù mgbe a nabatara iwu ahụ.
Lezienụ ụgwọ ndị ahụ kwetara mgbe ị na-etinye iwu.
11. Ibu ọrụ nke Lasers-Pointers.com
Nyefee ngwaahịa ahụ n'ezi ọnọdụ na ebe mbupu zigara gị.
Nkwanye ugwu di onu ahia nke ekwenyeghi n’oge emechara otu.
12. Ikike ndi ahia
Nabata ngwaahịa ndị na-eme ka iwu gị zuru oke.
13. Lasers-Pointers.com ikike
Nata ụgwọ nke iwu.
Gbanwee ọnụ ahịa guzobere na sava gị maka ngwaahịa gị.
Gbanwee oge nnyefe nke ngwaahịa ahụ dabere na nnweta otu.
Kagbuo iwu maka akwụghị ụgwọ nke ndị ahịa.
Kpochapụ weebụsaịtị n'enweghị ọkwa.
14. Ịma ọkwa
Maka ebumnuche nke ngosi, arịrịọ na ihe odide ọ bụla ụdị nkwekọrịta a na-enye, Lasers-Pointers.com ga-ahụta ka ọ bụrụ adreesị nke egosipụtara na Ọnọdụ General ndị a.
15. Nzipu nke okwu ndi ozo
Ọ bụrụgodi na akụkụ nke nkwekọrịta a ma ọ bụ otu akụkụ nke akụkụ ya abaghị uru ma ọ bụ na ọ gaghị emetụta ya, akụkụ ndị ọzọ nke ma ọ bụ akụkụ ya ga-adịgide na-aba uru ma bara uru.
16. Ụkpụrụ dị mma
Edebere iwu General ndị a ugbu a site na iwu Spanish ugbu a, ma ọ kachasị site na: Usoro Iwu, Iwu 26/84 nke June 19 General maka Nchebe Ndị Ahịa na Ndị Ọrụ, Iwu 7/98 nke Eprel 13, Ọnọdụ General nke Mweghachi, Iwu 7 / 96 nke 15 Jenụwarị na Ordinance nke Mzụmaahịa, Ntuziaka 2000/31 EC nke Ndị Ome Iwu Europe na nke Council nke 8 June, Iwu 34/2002 nke 11 July na Ọrụ Ndị Ọrụ Ozi na Azụmaahịa Elektrik, Iwu 23/2003 nke July 10 , Nkwa na ire nke ire ahia na iwu nke na ewulite ha.
Ihe ndị a bụ usoro ojiji nke Websaịtị www.Lasers-Pointers.com:
Iji weebụsaịtị a na / ma ọ bụ ịdenye aha dị ka onye ọrụ na-eche ịnabata usoro ojiji ndị a yana Ọnọdụ izugbe.
2. Onye nwe ebe nrụọrụ weebụ a
Ndi Lasers-Pointers.com nwe webusaiti a. Ikike nile nke ihe di n’ime ya, onyonyo, ederede, ihe na ngwa ya bu ihe ndi ulo oru.
Iwu nke nwebisiinka a, gụnyere nke enweghị mmachi, na-echekwa imepụta ya na ọdịnaya ya site na ikike nke ikike ọgụgụ isi, akụrụngwa nke ụlọ ọrụ na nkwekọrịta mba ụwa.
3. Jiri Afọ
Ọ gwụla ma Lasers-Pointers.com nyere ikike nke ọma, ịgaghị ewepụtagharị, bufee ma ọ bụ jiri ọdịnaya nke weebụsaịtị a n'ụzọ ọ bụla.
Ọ bụ ezie na Lasers-Pointers.com na-eme ike ọ bụla iji hụ na izi ezi na izi ezi nke ọdịnaya nke weebụsaịtị a, ọ nwere ike ịnwe njehie ma ọ bụ ezighi ezi. N'ihi ya, anyị anaghị ekwe anyị nkwa nzi ezi, ntụkwasị obi ma ọ bụ izi ezi nke ọdịnaya ya.
Lasers-Pointers.com na-egosipụta ibu dịịrị maka ozi dị na ebe nrụọrụ weebụ nke atọ ejikọtara na njikọta, yana ntanetị Lasers-Pointers.com.
Ọnweghị ọnọdụ ọ bụla a ga-ejide Lasers-Pointers.com maka mmebi ma ọ bụ mmerụ ọ bụla n'ụdị ọ bụla na-esite na, ma ọ bụ na njikọta ojiji nke weebụsaịtị a.
You ga-ewepụrịrị Lasers-Pointers.com maka mmebi ọ bụla dapụtara na ịhapụ irube isi na ọnọdụ ndị a ma ọ bụ iji ọdịnaya nke weebụsaịtị a na-enweghị ikike tupu enyere gị aka.
Ọ bụrụ n’onye ọ bụla nke ọnọdụ ndị dị ugbu a abaghị uru ma ọ bụ ghara ịdị irè ma ọ bụ bụrụ nke na-enweghị ike n'okpuru iwu dị adị, onyinye dị otú a agaghị enwe mmetụta ọ bụla, kama ọ bụ naanị ruo n'ókè nke enweghị nkwado ahụ, ọ gaghị emetụta usoro ndị ọzọ nke ọnọdụ Ugbu a.
6. Iwu na njikwa aka
A ghaghị ịkọwa Ọnọdụ Ndị a ma na-achịkwa iwu Spanish ugbu a. A ga-edozi esemokwu ọ bụla sitere n'ọnọdụ ndị a n'ụlọ ikpe nke Toledo, Spain. Otú ọ dị, nke a agaghị egbochi Lasers-Pointers.com site na iji ikike iji dozie ịgba akwụkwọ ọ bụla na ikike ọzọ.
Lasers-Pointers.com nwere ikike ịgbanwe ọdịnaya nke weebụsaịtị a n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa tupu.
8. Izu nzuzo zuru oke
Iwu Organic 15/1999, nke December 13, Nchedo nke Data Nkeonwe. Ihe data nkeonwe anakọtara ga-edo onwe ya n'okpuru nhazi akpaaka ma tinye ya na faịlụ data nke Luis Corraliza Sánchez, na-ahụ maka mmezi ya na ojiji ya.
Onye ahịa ahụ na-ekwenye na Personal Data nyere Lasers-Pointers.com ziri ezi na ọ bụ ọrụ maka ịkọwa mgbanwe ọ bụla na ha. Onye nwe data nwere ike igosi ikike nnweta, mmezi yana, dịka o nwere ike ịbụ, kagbuo site na izipu e-mail na: info@lasers-pointers.com